misoro yevakuru | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: vakuru vakuru
Ndezvipi zvinogadziriswa zvinofanira kuraswa musati wava nenguva yepedyo
Sezvaunoshanda nzira yako kuenda kumoyo wemurume kuburikidza nedumbu rake, edza kuti usapfuure. Kune zvekudya zvinogona kukanganisa zuva repedyo. Kurira kurira uye dumbu mudumbu, gasi kuumbwa, kubhenda - zvakadai ...
Kudzvinyirira hupenyu hwepabonde hwevakadzi kuti vadzivise sei?
Sezvo vakadzi vanokwegura, yavo bonde dhiraivha inogona kukurumidza kudzikira. Yakadzikira libido uye mafaro ndiyo miviri mikuru kunyunyuta. Iko hakuna kudikanwa kwekunyora pasi shanduko idzi pamberi penguva shanduko mumahormone, zvakakodzera kuongorora yakakosha ...
Anal sex. Dzidziso, Kudzidziswa uye Kuita
Iwe unoda kuyedza bonde nekumashure kunobuda nako tsvina, asi panguva imwechete tsandanyama dzako dziri kubatira nekutya? Aya matipi anotevera anobatsira iwe kutanga uye kunakidzwa nerudo rwechiGreek. Dzidziso Kune akawanda manzwi munzvimbo yekumashure, uye kukurudzira kwavo kunogona ...
Zvakaoma kuva mukadzi here?
Zvakaoma here kuva mukadzi? Ndiregererei pakupindura mubvunzo nemubvunzo, asi ... Zvakaoma kurarama zvachose? Vakadzi vanozvarwa, kwete kugadzirwa. Iko kune, chokwadika, vanhu avo vasingade yavo yechikadzi ...
Ungochani chirwere here kana kushatiswa? Ungochani hunogona kurapwa here?
Ungochani chirwere here kana kushatiswa? Ungochani hunogona kurapwa here? Mubvunzo unonakidza uye wakaoma, mhinduro yacho haina kunetsa. Sei? Nekuti ichi chiitiko chinofanirwa kuswededzwa zvakanyatso ...
Ichokwadi here kuti mumauto ehondo akawedzerwa uye akawedzera bromine kuti tiite? Kana kuti inhema here?
Ichokwadi here kuti bromine yaiwedzerwa ikaiswa tii mumauto? Kana kuti ingano here? Munguva dzeSoviet, vakawedzera.Ichokwadi chekuti isu takadzikama kubva kwaari, ini handina kucherechedza.
Nechikamu chiduku chepabonde, kondomu haifaniri chinhu here?
Nenhengo diki yekubereka nayo kondomu haribatsiri? Murume ane sikarudzi diki haashayi uye anogona nyore kuve baba! Kana baba vasina kurongwa panguva ino yehupenyu, saka ...
Ko varume vakaita sevakadzi vane mavara mapfupi, echechi?
Varume vanofarira vakadzi vane bvudzi pfupi, revakomana here? Kana musikana akagerwa iri quot; kumesoquot; Handina chandinopokana nacho. Asi ini ndinosarudza hushoma hurefu hwebvudzi remusikana, ndipo kana bvudzi richienderana ...
Nzira yekutumira sei mumakori ekutanga anonakidza?
Sei kutumira iwo ekutanga matatu anosetsa mavara? Chikamu cheichi ini ndinoda zita rangu remadunhurirwa uye ndirishandise kwete chete paBV. Ini ndinofunga kuti ini, musimboti, ndakanyatso kukura ...
Ndeipi nguva ipi iwe unoda kusvuta munhu asiri kusvuta?
Asingasvuti anoda kusvuta rini? Ndakaputa kamwe chete muhupenyu hwangu pandakaita tsaona yakakomba. Ndakashaya simba rekuchema, ndakarohwa nehana pandakatarisa kumota kwakapunzika nekumashure. Chinyararire ...
Nei mahomoni ari kutamba muchechi?
Nei mahormone achitamba muchirimo? Nekuti mushure mekureba kwenguva refu, chisikwa chose chinozopedzisira chauya kuhupenyu, mashizha, maruva, nemabukira anotumbuka. Kunze kuri kudziya. Zvese zvakasikwa zvinoita sekuzivisa kutanga kwehupenyu hutsva. Ndinoda ku…
Chii chinozivikanwa munhau yaIvan Kalita?
Chii chinonzi Ivan Kalita chinozivikanwa munhoroondo? Icho chokwadi chekuti akagamuchira chitambi kubva kuna Horde Khan wekutonga kukuru, mushure mekunge khan mumwe chete abvumidzwa hutungamiriri hweMoscow. Muchidimbu, mutero kuna ...
Chii chinonzi pissing?
Chii chinonzi pissing? Kune vanhu vanovhurwa neweti, kana pane vasikana vanodurura weti yavo. Vanogona kuzviita pane mumwe munhu, kana kungonyora, uye mudiwa anotsamwa anowana kubva kwazviri ...
Ndiani "MUNHU WAKANAKA" kwauri?
Ndiani "MUNHU WAKANAKA" kwauri? Ndine murume akadaro. Izvo zvinodikanwa kwazvo, zvakapfava, pakuona zvimwe zvacho mweya wangu unofara, nekuti ini ndoda zvemurume mudiki uyu ...
Newspaper + puddle = kuzvidzivirira kunogadziriswa zvinorevei? Pane akaedza here?
Pepanhau + puddle = kuzvidzivirira nenzira dzakagadziriswa? Pane chero munhu akambozviedza? Delirium zvirinani, tora ruble mari, gadzira ikholamu saizi yechanza chako, putira iyo yese chinhu neyekurapa kunamatira plaster - kana ichi chinhu ...
Sei mamishinari akafanana nevakadzi vakawanda?
Nei chinzvimbo chemamishinari chichifarirwa nevakadzi vazhinji? Munguva dzakasiyana dzehupenyu hwepabonde hwemukadzi, ivo vanofarira chinzvimbo chemamishinari nezvikonzero zvakasiyana. Pakutanga kwekuita bonde - chimiro ichi chinokonzeresa kudzora, ...
Sei musikana wangu achitya zvepabonde?
Sei musikana wangu achitya bonde? Ndinofunga hazvaingova kuti aive aine ruzivo rwakanyanya uye rwusingafadzi, uye pamwe kunyangwe rwekutanga paakange akadhakwa.Saka izvi zvinogona kunge zviri ...
Chii chinokosha chekushongedza kwe69?
Chii chakakosha poindi 69? Teerera kune iwo manhamba ivo pachavo. Kugadziriswa kwavo kunozvitaurira. Munguva yehukama, vadyidzani vari muquot; pane zvinopesana quot ;. Kutaura, matavi nenzira dzakasiyana, ...
Iko hymen haisi nguva dzose yakanganisa panguva yepabonde here?
Hymen haigarokuvadzwa nguva yepabonde here? Ehe, zvinoitika. Hazvishamise kana vamwe vasikana vakakwanisa kuita bonde kwenguva pfupi, asi kuvimbika kwenziyo iyi hakuna kutyorwa. ...
Ndezvipi zvinonyadzisira zvinonyadzisira uye kuti zvakasiyana sei nezvinoitika?
Chii chinonzi soft porn uye zvakasiyana papi neyakajairwa porn? Nyoro nyoro inopesana nehupombwe. Inotaridzika kunge yakapfava. Chinhu chiri padyo neeroticism. Asi izvi hazvisi zvekutsvaga, nekuti ...
Mibvunzo ye64 mu database yakagadzirwa mu 0,528 masekondi.